ဧပြီလ 2014 - စာမျက်နှာ3- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2014 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 3)
ATEME ရဲ့ Titan encoding က Ultra High Definition (UHD) 4K အကြောင်းအရာနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖို့ကဘဝမှကယျတငျ!
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ Homechoice ကွန်ယက်, ကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံး UHD (Ultra High Definition) ကေဘယ်လ်လိုင်းကိုသကဲ့သို့, UMAX Channel ကိုဖွင့်လှစ်! ဧပြီလ4အပေါ် 60Kp2160 (တစ်စက္ကန့် 3840 ဘောင်နှင့်အတူ 60 × 10 pixel resolution နဲ့) တွင်အသံလွှင့်, 2014- အဆိုပါ Homechoice ကွန်ယက်က၎င်း၏ခြွင်းချက်ဗီဒီယိုကိုအရည်အသွေးနှင့်လိုက်ဖက်မှုအတှကျအတိုက်တန်းနစ်ကို ရွေးချယ်. ! titan, Multi-screen ကိုများအတွက် Real-time Multi-ချန်နယ် / format နဲ့အန်ကုဒ် / transcoder ATEME ရဲ့လာမယ့်မျိုးဆက်တီဗီဌာနမှူး-End ဖြစ်ပါတယ် ...
InfoComm 2014 မှာ Atomos
InfoComm မှာ Atomos ပြရန် 4K Shogun နှင့် Ninja စတား Record (မဲလ်ဘုန်း, သြစတြေးလျဧပြီလ 29, 2014) Atomos, ထိုဆုရ Ninja နဲ့ဆာမူရိုင်းကင်မရာ-တပ်ဆင်ထားအသံဖမျးနှင့် Connect ကို converters များကိုဖန်တီးသူ, InfoComm14, 18th -20th ဇွန်လမှာပြပါလိမ့်မယ် , Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (Booth အရေအတွက်ကို C6349) ။
Marla Mossberg နှင့်အတူထောပတ် Music နဲ့အသံအသင်းများ
MBW ၏ Marla Mossberg နှင့်အတူ (ဗင်းနစ်, ကယ်လီဖိုးနီးယား-ဧပြီလ 29, 2014) Bicoastal ဂီတဆိုင်နို့ဓမ်း Music နဲ့အသံဆိုင်းဘုတ်များအနောက်ဘက်ကမ်းခြေရောင်းအားကိုယ်စားပြုမှုအဘို့ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ထိပ်တန်းဆင့်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့သက်သေတွင် track record နှင့်အတူ, Mossberg ရဲ့တန်းစီဇယားကိုလည်းတိုက်ရိုက်အရေးယူဒါရိုက်တာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတွေဟာ host ပါဝင်သည်။ ထောပတ်မကြာသေးမီက EP-Marcus ကဦးဆောင်ဗင်းနစ်မှာသူတို့ရဲ့အနောက်ဖက်ကမ်းခြေရုံးဖွင့်လှစ် ...
ချုပ်အချိန်အတှကျအဆငျသငျ့မ 4K? အဆိုပါစကားပြောဆိုမှုဆက်လက် ...
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကျနော်တို့ချုပ်အချိန်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား NAB မှာဆောင်းပါး 4K Big posted ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးလား? ယခုတပတ်ကျနော်တို့စာဖတ်သူများအနေဖြင့်အချို့သောစစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်များနှင့်မှက်ချက်ပေးရန်အတွက်နှင့်သင်တို့၏အကြံအစည်နှင့်မှတ်ချက်များကိုဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ထုတ်လွှင့်များ၏နှောင်းပိုင်းက 2013 အတွက်ကောက်ယူထားတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်တမ်းများတွင်လိုလားသူသည်ဗီဒီယို & ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအဆောက်အ - 2013 ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေး Trends အစီရင်ခံစာ - SCRI တွေ့ရှိခဲ့ ...
ARRI Inc ကိုမဟာဗျူဟာမြောက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါရိုက်တာနှင့်နည်းပညာစျေးကွက်မှ Stephan Ukas-Bradley ကိုအားပေးအားမြှောက်
(Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယား-ဧပြီလ 29, 2014) ARRI Inc ကို Stephan Ukas-Bradley မဟာဗျူဟာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါရိုက်တာနှင့်နည်းပညာစျေးကွက်မှရာထူးတိုးထားပြီးကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်။ ဤသည်အသစ်ဖန်တီးအနေအထား Ukas-Bradley, မြူးနစ်အတွက် ARRI ရဲ့ R & D နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်နှင့်အတူအားထုတ်မှုညှိနှိုင်းအပြင်နောက်ထပ်, စီးပွားရေး, နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများနှင့်အတူဆက်ဆံရေးတိုးချဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ထောက်ခံမှုနည်းပညာမိတ်ဖက်ခွင့်ပြု ...
စတုတ္ထနှစ်ပတ်လည်တနင်္ဂနွေမိသားစု Funday နယူးယောက်မှာရှိတဲ့အနောက် 18th လမ်းကျော်ယူ
ဦးဆောင်ဓာတ်ပုံနှင့်အီလက်ထရောနစ်လက်လီအရောင်းဆိုင် Adorama, စားနပ်ရိက္ခာတစ်ဦးအခမဲ့မိသားစုပွဲတော်သို့မန်ဟက်တန်ရဲ့အနောက် 18th လမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနင်္ဂနွေနေ့ပျော်စရာနှင့်နည်းပညာ, ဇွန်လ 8 (နယူးယောက်, New York ကဧပြီလ 29, 2014) Adorama, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဓာတ်ပုံများထဲမှ, ဗွီဒီယိုနဲ့ အီလက်ထရောနစ်လက်လီရောင်းသူများ, နယူးယောက်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနွေရာသီမိသားစုဖြစ်ရပ်များ, င်း၏စတုတ္ထနှစ်ပတ်လည်တနင်္ဂနွေမိသားစု Funday တစ်ဦးကိုင်ထားသည်။ ...
နှေးနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် The Nation အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးများများထဲတွင်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုအားတိုးတက်စေနိုင်ခြင်းသည်လည်းဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ 29th နှစ်ပတ်လည်စန်းလူး Obispo နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ (စန်းလူး Obispo ကယ်လီဖိုးနီးယား-ဧပြီလ 2014, 20) ကစီစဉ်တက်ရောက်သူနှင့်ဝင်ငွေက သာ. ကြီးမြတ် countywide စီးပွားရေးအပေါ်တွင်လည်းသက်ရောက်မှုဆောင်ခဲ့ 2014 အတွက်နံပါတ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့တိုးပွားလာကြောင်းအစီရင်ခံရန်ဝမ်းသာကြသည်။ အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ရပ်မတ်လ 5-9 တင်ပြ, 2014, တဖြည်းဖြည်းလူကြိုက်များနှင့်ဂုဏ်သတင်းကြီးထွားလာခဲ့ပြီးနှင့်တစ်ဦးအမည်ရှိ၏ ...
Edina ၏စီးတီး Tightrope Cablecast နှင့်အတူပြည်တွင်း, HD / SD ကတံစို့လိုင်းများအလိုအလျောက်
EDINA 16 မင်နီဆိုတာ ST အတွက် Comcast ရဲ့ပထမဦးဆုံး HD ကိုတံစို့ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပေါလု, Minnesota, ဧပြီ 29, 2014 - မင်နီဆိုတာအတွက် Edina အဝန်း Channel ကို 16 မကြာသေးမီက Tightrope မီဒီယာ Systems မှနည်းပညာအကူးအပြောင်းနှင့်အသစ်ထောက်ပံ့အတူ Comcast cable ကိုစနစ်များအပေါ် HD မှာထုတ်လွှင့်ဖို့ပြည်နယ်၏ပထမဆုံးအများပိုင် Access ကို-ပညာရေးဆိုင်ရာ-အစိုးရ (တံစို့) ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ။ Edina ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးစီးတီးအားဖြင့် run ...
Aframe Maverick တီဗီဒစ်ဂျစ်တယ်နေ့စဉ် Move နဲ့ TV Show ကိုအဘို့အားလုံးအကြောင်းအရာ "Gok ယ Panto" ကို Metadata Add ကူညီပေး
(လန်ဒန်, ဗြိတိန်, ဧပြီလ 29, 2014) Maverick တီဗီ, နောက်ကွယ်မှထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ "ရှက်သွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့", "ကျွန်းဆေးရုံ" နှင့် "ထူးထူးဆန်းဆန်း ER, Gok မ" ဟာသူ့ရဲ့တီဗွီရှိုးများထုတ်လုပ်မှုအလျင်စလိုကူညီရန် Aframe ၏ cloud ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုထားပါတယ် " Panto ။ "" Gok ယ Panto "တီဗီတင်ဆက်သူနှင့် stylist Gok ဝမ်ကသူ၏စင်မြင့်ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်းအဖြစ်နောက်ကွယ်မှကြည့်ယူမယ့်တဦးတည်းနာရီပြပွဲသည် ...
Shindler ရဲ့ 2014 #NABShow အမြင်
ထိုကဲ့သို့သောလူငယ်ကဏ္ဍညီလာခံ (NAB) ၏အမျိုးသားအစည်းအရုံးနှင့် Consumer Electronics Show (CES) နှင့်အခြားသူများအားအဖြစ်ဗိုလ်မှူးနှစ်ပတ်လည်စက်မှုလုပ်ငန်းညီလာခံကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများမှအရေးပါလှပေသည်။ ကျနော်တို့အနီးကပ်တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးနည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြေညာချက်များကိုခြေရာခံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဖြစ်သူတို့သည်ငါတို့ clients များ impact ကိုဘယ်လိုအဘို့ဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ရန်နှင့်နေစဉ် ...
Aframe Maverick တီဗီဒစ်ဂျစ်တယ်နေ့စဉ် Move နဲ့ TV Show ကိုအဘို့အားလုံးအကြောင်းအရာမှ Metadata Add ကူညီပေး "Gok ယ Panto" V ကိုပြရန် "Gok ယ Panto"
လန်ဒန်နဲ့ဘော့စတွန်ဧပြီလ 29, 2014 - Maverick တီဗီ, နောက်ကွယ်မှထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ "ရှက်သွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့", "ကျွန်းဆေးရုံ" နှင့် "ထူးထူးဆန်းဆန်း ER, Gok ယ Panto" က၎င်း၏တီဗွီရှိုးများထုတ်လုပ်မှုအလျင်စလိုကူညီရန် Aframe ၏ cloud ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုထားပါတယ် "။ "" Gok ယ Panto "တီဗီတင်ဆက်သူနှင့် stylist Gok ဝမ်အဖြစ်နောက်ကွယ်မှကြည့်ယူမယ့်တဦးတည်းနာရီပြပွဲသည် ...
Popular Postproduction System Manufacturer to Support Dolby Vision: Are HDR …
See on Scoop.it – Broadcast Beat Magazine, Daily EditionPopular Postproduction System Manufacturer to Support Dolby Vision: Are HDR …See on www.hollywoodreporter.com
Blackmagic Design: Cintel
See on Scoop.it – Broadcast EngineeringLook at this announcement from Blackmagic Design at NAB Show!… t.co/C3n5YCi5KISee on www.blackmagicdesign.com
Broadcast Chief Engineer (Houston, Texas, United States)
See on Scoop.it – Broadcast EngineeringBroadcast Engineering Job with Clear Channel Communications located in Houston, Texas, United States.transmitters for minimal downtime* Assist Director of Engineering with maintenance and administration of studio …… (New Job: Broadcast Chief Engineer,…See on directory.engineeringdaily.net
အိတ်ကပ်စီးရီး NabShow 2014 Coverage
See on Scoop.it – Broadcast Engineeringedelkrone® is an innovation company, experienced in camera support accessories. We have forged passion of filmmaking with advanced engineering. edelkrone.com/ edelkrone.us/...See on www.youtube.com
ထုတ်လွှင့်စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာအလုပ် | ခရစ်စမီဒီယာ Solutions
Scoop.it တွင်ကြည့်ရှုပါ - Broadcast EngineeringJob:3လအတွင်းလန်ဒန်အခြေစိုက်ထိပ်တန်းရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ကုမ္ပဏီနှင့်စာချုပ်ချုပ်ရန်အတွက် Broadcast Project Engineer လိုအပ်သည်။ နေ့စဉ်နှုန်း - £ 300 - £ 330 ။ christy-media.com တွင်ကြည့်ပါ
3 ၏စာမျက်နှာ 47«12345	»	102030...နောက်ဆုံး»